Momba anay - Hebei Shenghang Building Material Co., Ltd.
Hebei Shenghang Building Material Co., Ltd. dia orinasa vaovao namboarina, nokarakarain'ny talenta ao amin'ny lafiny sci-tech, indostrian'ny varotra & varotra. Ny orinasanay dia nanangana ny fototry ny fanorenana, ny fototry ny fampandrosoana ny vokatra mineraly, ny fikarohana sy ny rafi-pivoarana ho an'ny tambajotra, logistics & rojo vy fandefasana. Ny orinasanay dia namorona lamina efatra misy kodiarana maharitra amin'ny orinasa, izay misy vokatra isan-taona mihoatra ny 1.5 miliara RMB. Nandalo ny rafitra fitantanana kalitaon'ny fanamarinana CE sy ISO9001: 2015 izahay. Nahazo ny «Award ho an'ny kalitao», ny Award ara-tsiansa sy teknolojia isika, "Tandremo ireo fifanarahana ary mitazona fampanantenana". Ny marika «Iron Crown» dia nahazo ny marika amin'ny kalitao any Shina.
Ny tanjonay amin'ny raharaham-barotra dia: mitazona ny vokatra miaro ny tontolo iainana sy tsy manam-paharoa, mifototra amin'ny tsy fivadihana, kalitao voalohany, manome serivisy tsara indrindra sy vidiny tsara ho an'ny mpanjifa, mahafeno ny fangatahan'ny mpanjifa amin'ny ambaratonga samihafa isan-karazany.
Hebei Shenghang Building Material Co., Ltd. dia orinasa lehibe amin'ny indostrian'ny fananganana angovo miaro ny tontolo iainana. Misy andalana 6 famokarana ao amin'ny trano fanamboaran-trano misy anay, ny vokatra lehibe eto dia ny marika "Iron Crown" High Strong MgO Insulating Roofing Sheets, Magnesium Oxide Wall Board, ary koa misy haingon-trano mpamono afo sy fizaram-paritra, toy ny Board Magnesium Oxide, Kalsioma Birao Silicate sy sela Fibola simika, sy ny sisa mihoatra ny 20 karazana vokatra.
Nametraka fiaraha-miasa stratejika amin'ny Anenglujian Architectural Technology Co, Ltd, Beijing University of Technology, NC University of Science and Technology, Chinese Academy of Science, sns. Izahay dia mikaroka trano vaovao efa voatahiry ho an'ny famokarana angovo; Nomena patentim-pirenena maro izy io ary be mpampiasa amin'ny fananganana trano sy indostrialy.
Ny vokatra azonay dia nafindra any amin'ny tany sy faritra 40 mahery sy ny fanondranana isan-taona mihoatra ny 70 tapitrisa dolara, ary noraisin'ireo mpanjifa tsara.
Tady fandrefesana, Taratasy vita amin'ny famononam-bary any Galvalume, Sheet plastika vita amin'ny plastika, Sampam-by vy vita amin'ny vy, Mpitety tafo fanala, Sheet vy voakorontana,